छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको विवादबारे नेकपा यस्तो भन्छ
साउन २७, सल्यान । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जनप्रतिनिधिले विधि र प्रक्रिया अनुसार वजेट आए पास हुने बताएका छन । गत असार १० गते गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम र वजेट पेश गरेको जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउपालिकाको डेढ महिना बित्दा समेत अझै पारित हुन सकेको छैन । सोमबार भोटेचौरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपाबाट निर्बाचित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले यस्तो बताएका हुन ।
उनीहरुले गाउपालिकाले नीति, विधि र प्रक्रिया अनुसार नीति तथा कार्यक्रम गाउसभामा पेश नगरेको बताएका हुन । अहिले बजेटको बिषयलाई गाउपालिका अध्यक्षले करारका कर्मचारी संग जोडेर गाउसभा नै बस्ने वातावरण नबनाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेकपाबाट निर्बाचित छत्रेश्वरी गाउपालिका ५ का वडाअध्यक्ष लिलाधर घर्तीले एजेण्डा सहित बिषयगत समिति बाट कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने र कार्यपालिका बैठकबाट व्यापक छलफल गरेर गाउसभामा पठाउनु पर्ने प्राबधान भएपनी नीति संगत नभएकोले निति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नदिएको बताएका छन ।
तर गाउपालिका अध्यक्षले बजेट र करार कर्मचारीलाई संगै जोडेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन । प्रचलित बिधि र प्रक्रिया अनुसार गाउसभामा निति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएको उनको भनाई छ ।
अहिले करार कर्मचारीलाइ मुख्य एजेन्डा बनाइएको बताउदै छत्रेश्वरी गाउपालीका २ का वडाअध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले आबश्यकता बाहेक का करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताए । उनले गाउपालिका अध्यक्षले भने जस्तो सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको बताए ।
पहिले कर्मचारी थिएनन्, हामीले करारमा कर्मचारी भर्ना ग¥यौ, पछि प्रदेश र केन्द्रले कर्मचारी पठाए पछि करारका कर्मचारी हटाउनुपर्छ भन्ने माग हो, खालि रहेको स्थानमा स्थायी कर्मचारी आएका छन, तीन वटा वडामा २,२ जनाको दरले वडा सचीव छन्, उनले भने यो सिमित स्रोत र साधन भएको गाउपालिका हो, थोरै भए पनि गाउपालिकालाई किन आर्थिक भार थप्ने ?
यस्तै वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष नेव बहादुर खड्काले गाउपालिकाबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन बिगत देखि नै माग गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । गाउपालिकाको खर्च आम्दानी मासिक रूपमा सार्वजनिक गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै गाउपालिकामा गठन गर्नैपर्ने बिषयगत समितिहरु गठन नगरी मनोमानी ढंग बाट चलेको उनले बताए । यस्तै वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष राज बहादुर बुढाथोकीले आफ्नै गाउपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विरुद्ध मिडियाबाजि गर्नु लज्जास्पद भएको बताए ।
छलफल तथा संवाद कार्यपालिका बैठकमा गर्न सकिने बताउदै उनले गाउपालिका अध्यक्षले आफुहरु विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेपछि बास्तबिकता सार्वजनिक गर्नको लागि आफुहरु पनि पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन ।
उनले सबै कार्यपालिका सदस्यको उपस्थितिमा कार्यपालिका बैठक बस्ने र छलफल गर्ने खालको बाताबरण गाउपालिका अध्यक्षले बनाउनु पर्ने बताए । आफुहरु बजेट ल्याउनको बाधक नभएको बताउदै नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुले बरु कानुन संगत बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन । उनीहरुले बिधि र प्रक्रिया बाहिर रहेर आएको बजेटलाई पारित हुन नदिने बताएका छन ।
प्रकाशित मिति : २०७७ साउन २७ गते मङ्गलवार
दुई छोरी सहित श्रीमती बेपत्ता भएपछि श्रीमानको बिजोग (भिडियो सहित)
सल्यानमा नेकपाका १२ जनाले पाए इन्चार्जको जिम्मेवार, ४ जनाको कार्यक्षेत्र बदलियो
अस्पतालमा बच्चा जन्मियो तर आमाको मृ’त्यु भयो
सल्यानका इन्द्र केसीको परिवारले पाए ५ लाख ३० हजार
अनेरास्ववियूको संबिधान दिवसमा योगमय दिप प्रज्वलन
तुलसीपुरमा पनि मनाईयो संविधान दिवस
कपिलवस्तुमा बाढीले गाडी बगाएपछि…
टोलमा शान्ति स्थापन गर्न अन्तरक्रिया
कैदी रामलखनको शवबाट अंग निकालिएको हो त ?
अझै एक हप्ता लाग्ने मनसुन बाहिरिन